Madaxweynaha oo kulamo la qaatayþ | Somalisan.com Home
Madaxweynaha oo kulamo la qaatayþ
1/3/2013 8:14:00 AM
Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud ayaa u mahad celiyay Madaxweynaha iyo shacabka reer Sudaan sida wanaagsan ay usoo dhaweeyeen wafdiga Soomaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayay oo booqasho ku jooga Sudaan ayaa maanta waxeey la kulmeen Madaxweynaha Sudaan Mudane Cumar Xassan Al-Bashiir iyo golahiisa Wasiiradda.
Safarkaan uu Madaxweynaha ku joogo Sudaan ayaa qeyb ka ah safaro Madaxweynaha uu ku marayay dalalka Geeska Afrika dhamaadkii sanadkii lasoo dhaafay. Safaradaan ayaa waxaa lagu xoojinayaa xiriirka Soomaaliya iyo dalalka ku yaala Geeska Afrika. Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud ayaa u mahad celiyay Madaxweynaha iyo shacabka reer Sudaan sida wanaagsan ay usoo dhaweeyeen wafdiga Soomaliya. Sidoo kalena ku aamanay horumarka ay Sudaan gaartay oo ay ka mid tahay biyo xireenka Damazin ee ku yaala gobolka Blue Nile.